Uyu ndiwo mukana wako wokupedzisira kusvikira zuva rekutanga kuwana 25 $ Moto Moto stick kana 35 Moto Moto stick $ 4K - BGR - TELES RELAY
HOME » Deals Uyu ndiwo mukana wako wekupedzisira kusvikira zuva rekutanga kuwana 25 $ Moto Moto stick kana 35 Moto Moto TV tsvimbo $ 4K - BGR
2019 Prime Day haina kuitika kusvikira munaJuly, asi zuva guru reAngoni rinotengesa rakauya zvishoma kutanga kwezvinhu zviviri zveAmerica zvakatengesa zvakatengeswa kare. ari Moto TV Stick ndechimwe chezvinhu zvinotengeswa zvinotengeswa zvinoshandiswa nguva dzose. Iko ikozvino inotengeswa pamutengo we $ 24,99 panzvimbo ye $ 40. Zvadaro pane mhando itsva Moto TV Stick 4K iyo inowedzera 4K chisarudzo uye rutsigiro rweHDR. Inowanzozotengesa $ 50 uye kukosha kwemari kwakanakisisa, asi kwekanguva, iri pa $ 34,99. Zvose izvi zvinowanikwa chete kune vamiriri vepamusoro-soro (sezvinoitwa Prime Day sales), uye zvingangogumira pane imwe nguva mukati mevhiki.
Moto TV key
Yedu yatinotengesa Fire Fire Key, ikozvino inowanikwa ne Alexa Voice Remote (2e Generation). Shandisa simba rakazvitsaurira, ivhu, uye mbeveve mabhatani ekudzora TV yako, bharuti, uye kugamuchira.
Tanga uye tungamira zviri mukati ne Alexa Alexa Remote. Tarisa nhare dzako pakati peNetflix, Prime Video, Hulu, STARZ, SHOWTIME kana CBS All Access, uye teerera kwavari pachena nePluto TV, IMDb Freedive, nezvimwewo.
Moto TV Stick majaira ane unhu hwekuchengetedza huzhinji hwemapurogiramu nemitambo kupfuura chero imwe shanduro. multimedia key nguva dzose.
Discover makumi ezviuru hova, mafomu uye Alexa unyanzvi, uye browse mamiriyoni padandemutande nzvimbo dzakaita YouTube, Facebook uye Reddit Firefox kana Silk.
Alexa neMoto TV anopa yakakwana inzwi ruzivo kuwanikwa chero kumhanyira nevezvenhau mutambi: kuona mhenyu vhidhiyo nzizi, tarisa ekunze, kudzima magetsi uye rukova mumhanzi.
Amazon Nhengo huru dzine ruzivo rwakakwana kune zviuru zvemafirimu neTV zvikamu, pamwe nekusununguka kuteerera kumamiriyoni emimhanzi ne Prime Prime.
Hapana chinyorwa kana sataneti? Hapana dambudziko. Cherechedza fenyu yeTV uye uchiteerera purogiramu yemitambo nekubhadhara kuHulu, PlayStation View nevamwe.
Shandura zvisina kuchena pakati pe headset yako uye yako audio system: Pair inonzi Bluetooth headset inoenderana neTime TV kuti inoteerera mafirimu, zviratidzo zveTV, nemimhanzi.
Moto TV Key 4K
Chirongwa chakasimba zvikuru che 4K svondo huru ne Wi-Fi antenna design yakagadziriswa nenhaurwa yepamusoro 4K Ultra HD inoshambadza.
Fara mufananidzo wakawanda nekutambira ku Ultra HD 4K, Dolby Vision, HDR uye HDR10 +. Farira immersive inzwi neDolby Atmos pane mamwe Prime Video titles.
Sarudza kubva ku500 000 mafirimu uye zvikamu zveTV. Tarisa Netflix's favorites, Prime Video, Hulu, STARZ, SHOWTIME, CBS All Access, nezvimwe.
Moto TV Stick majaira ane simba rekuchengetedza rekushandisa nemitambo kupfuura chero ipi zvayo yekufambisa.
Tsvaga makumi ezviuru zveA Alexa channels, mapurogiramu uye unyanzvi, pamwe nemamiriyoni emawebsite akaita se YouTube, Facebook uye Reddit.
Alexa pamusoro peTV TV inopa huwandu hwezwi hunoshandiswa pane chero mutevedzeri wevhidhiyo yemutambo: tarisa mhepo yemafuta yemafuta, chengetedza mamiriro okunze, kuisa magetsi uye mimhanzi inopararira.
tevera @Bkuueals pa Twitter kuti urambe uchitarisana nezvinodiwa zvezvino uye zvinonakidza zvatinoona pane webhu.
Kuti uwane zvakawanda pamusoro pezvatinopiwa uye zvakatsigirwa nemikana mikana, tapota tumira email kune inotsigirwa ne bb.com
Zvinyorwa zveBGR Deals zvakasununguka kubva muHedheni uye Adver BGR inogona kugamuchira mutengo wekutenga kunoitwa kuburikidza nematunhu edu.
MicroSD SanDisk kubva ku7 $, Kutengesa AirPods 2, 9 $ Wireless Charger, Apple Tarisa pa 199 $, Plus - BGR